GigCoin စျေး - အွန်လိုင်း GIG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GigCoin (GIG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GigCoin (GIG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GigCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GigCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GigCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GigCoinGIG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0234GigCoinGIG သို့ ယူရိုEUR€0.0199GigCoinGIG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.018GigCoinGIG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0214GigCoinGIG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.212GigCoinGIG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.148GigCoinGIG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.523GigCoinGIG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0877GigCoinGIG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0314GigCoinGIG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0327GigCoinGIG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.525GigCoinGIG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.182GigCoinGIG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.127GigCoinGIG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.76GigCoinGIG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.93GigCoinGIG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0322GigCoinGIG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0355GigCoinGIG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.732GigCoinGIG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.163GigCoinGIG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.48GigCoinGIG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩27.86GigCoinGIG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.87GigCoinGIG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.73GigCoinGIG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.648
GigCoinGIG သို့ BitcoinBTC0.000002 GigCoinGIG သို့ EthereumETH0.00006 GigCoinGIG သို့ LitecoinLTC0.000408 GigCoinGIG သို့ DigitalCashDASH0.000241 GigCoinGIG သို့ MoneroXMR0.00025 GigCoinGIG သို့ NxtNXT1.7 GigCoinGIG သို့ Ethereum ClassicETC0.00333 GigCoinGIG သို့ DogecoinDOGE6.74 GigCoinGIG သို့ ZCashZEC0.00025 GigCoinGIG သို့ BitsharesBTS0.921 GigCoinGIG သို့ DigiByteDGB0.86 GigCoinGIG သို့ RippleXRP0.0796 GigCoinGIG သို့ BitcoinDarkBTCD0.000803 GigCoinGIG သို့ PeerCoinPPC0.0807 GigCoinGIG သို့ CraigsCoinCRAIG10.62 GigCoinGIG သို့ BitstakeXBS0.994 GigCoinGIG သို့ PayCoinXPY0.407 GigCoinGIG သို့ ProsperCoinPRC2.93 GigCoinGIG သို့ YbCoinYBC0.00001 GigCoinGIG သို့ DarkKushDANK7.47 GigCoinGIG သို့ GiveCoinGIVE50.42 GigCoinGIG သို့ KoboCoinKOBO5.43 GigCoinGIG သို့ DarkTokenDT0.0216 GigCoinGIG သို့ CETUS CoinCETI67.23
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 21:55:03 +0000.